3 चरणहरू Semalt को समर्पित Seo ड्यासबोर्डको साथ वेबसाइट रूपान्तरण वृद्धि गर्न
के तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले ती हेर्ने उत्पादनहरू किन खरीद गर्दैनन् वा सम्पर्क फारम भर्छन्? कम रूपान्तरण विभिन्न समस्याहरूसँग सम्बन्धित हुनसक्दछ - वेबसाइटको कार्यक्षमताबाट, उत्पादको गुणस्तरको बारेमा अनिश्चितता मार्फत, साधारण टेक्निकल त्रुटिहरूमा, उदाहरणका लागि। फारममा त्रुटि जुन अर्डरलाई राख्दैन। यस लेखमा, तपाईले कम रूपान्तरणको कारण के हुन सक्छ, र कसरी यसलाई बढाउने भनेर जान्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउन के गर्ने?
रूपान्तरण दर एक सूचक हो जुन तपाईंको वेबसाइटमा अन्तर्क्रियाको% देखाउँदछ जुन रूपान्तरण भयो, त्यो हो, जहाँ तपाईंको लक्ष्य प्राप्त भएको थियो। अनलाइन स्टोरहरूको लागि, लक्ष्य प्राय: प्रयोगकर्ताले खरीदको लागि गर्नुपर्नेछ, जबकि सेवा वेबसाइटहरूका लागि - तिनीहरूको सेवा प्रयोग गर्न।
कम रूपान्तरण दर वेबसाइटमा ट्राफिकको अभावको परिणामस्वरूप हुँदैन। यो यस्तो हुन्छ कि प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटमा प्रवेश गर्छन्, तर अन्ततः हाम्रो लक्ष्य प्राप्त नगरीकन यसलाई छाड्छन्। ट्राफिकलाई रूपान्तरणमा कसरी बदल्ने? हामीले गतिविधिका main मुख्य क्षेत्रहरू छुट्याएका छौं जुन वास्तवमै उपभोक्ताहरूको खरीद निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दछन्।
१. यूएक्सको ख्याल राख्नुहोस्
प्रयोगकर्ता अनुभव - प्रयोगकर्ता अनुभव एक पहलू हो जुन वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा ठूलो प्रभाव पार्दछ।
यो ध्यान देने योग्य छ कि हामी वेबसाइटमा उपभोक्ता राख्दछौं कि भनेर विवरणबाट प्रभावित हुन सक्छ - उदाहरणका लागि। रंगहरूको छनौट वा CTA डिजाइन गरिएको तरीका। दुबै दृष्टि र प्राविधिक रूपमा वेबसाइटको अनुकूलन, प्रयोगकर्ताको आवश्यकताहरू - यसमा योगदान दिन सक्छ रूपान्तरण मा वृद्धि।
एक कार्यात्मक वेबसाइट गुगल एल्गोरिदम द्वारा पनि सराहना गरिन्छ। भर्खरको अद्यावधिकहरू, जस्तै कोर वेब वाइटलहरू, दिशा निर्देशन हाईलाइट गर्दछ जसमा Google हेडि is गर्दै, कार्यक्षमता र उपयोगितालाई पहिले राख्दछ।
मोबाइल र डेस्कटपमा कार्यात्मक दृश्य
अधिक र अधिक व्यक्तिले मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्, त्यसैले जब कुनै वेबसाइट डिजाइन गर्दा, यो स्क्रिनको आकारलाई वास्ता नगरिकन यो सुनिश्चित गर्न लायक हुन्छ कि यो प्रयोगात्मक हो। २०२० देखि गेमिअस अनुसन्धानका अनुसार Internet users% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन खरिद गर्छन्, जसमध्ये आधाले मात्र डेस्कटप कम्प्युटरलाई यस उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछन्। जति धेरै users०% प्रयोगकर्ताहरूले ल्यापटप प्रयोग गर्दछन्,%%% ले स्मार्टफोन र २%% ट्याब्लेट प्रयोग गर्दछ।
वेबसाइटको उत्तरदायित्व, अर्थात् वेबसाइटको लेआउट समायोजन जुन उपकरणहरूमा यो प्रदर्शित हुन्छ, अब डेस्कटपको सट्टा मोबाइल छनौट गर्नेहरूको लागि हप्का होइन, तर एक अनिवार्य बिन्दु हो।
लुक्ने विज्ञापनहरूको बहिष्कार
पप-अपहरू एक यस्तो तत्व हुन् जसले सम्भावित ग्राहकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ। उपद्रव सूचनाहरू वा हार्ड-टु-नजिक विन्डोले प्रयोगकर्तालाई पृष्ठ छोड्दछ।
यस प्रकारको आक्रमक विज्ञापनहरू बाहेक यो महत्वपूर्ण छ, र यदि हामी उदाहरण को लागी सन्देश चाहन्छौं। उत्पादनहरूको एक अत्यधिक मूल्यवान समूह, एक आकर्षक छुट वा न्यूजलेटरको सदस्यता वेबसाइटमा प्रविष्ट गरे पछि प्रदर्शित हुने सम्भावना, निश्चित गर्नुहोस् कि विन्डोले वेबसाइटमा अन्तर्क्रियाको संभावनालाई रोक्दैन।
के पप अप सधैं खराब विचार हो? बिल्कुल होईन - साँचो सही छनौटको लागि कुञ्जी हुनेछ, उदाहरणका लागि। वेबसाइट छोड्ने प्रयोगकर्तालाई प्रदर्शित पप अप ग्राहक बचत गर्ने मौका हो, रूपान्तरण गुमाउने जोखिम होइन।
स्टोर को स्पष्ट संरचना
वेबसाइटको स्पष्ट संरचना यसको माध्यमबाट नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउँदछ। प्रयोगकर्ताहरूले सहज नेभिगेशन, द्रुत रूपमा अघिल्लो चरणमा फिर्ता जान सक्ने क्षमता, उच्च कोटी, र चाँडै उनीहरूले रूचि राख्नु भएको उत्पादन फेला पार्दछन्।
विचार गर्नुहोस् कि तपाइँको अनलाइन स्टोर मा उत्पादनहरु कोटिहरु सही प्रकारले कोटीहरु लाई तोकिदिएका छन र केहि धेरै वा धेरै यी कोटीहरु धेरै छन्? के फिल्टरिंग पर्याप्त छ? नेभिगेसन सहजीकरण गर्ने एक उदाहरण हो ब्रेडक्रम्ब्स, अर्थात् एक ब्रेडक्रम्ब मेनू जसले पृष्ठ वा खरीद प्रक्रियाको चरणमा प्रयोगकर्ता कहाँ छ भनेर देखाउँदछ।
वेबसाइटमा सामग्री भर्चुअल विक्रेता हो। यो सामग्री बनाउँदा यो सम्झन लायक छ। अनौंठो, रमाईलो उत्पादन वा कोटी विवरणहरू जसले उपभोक्ताको प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ खरीद निर्णयलाई असर गर्न सक्छ। प्रयोगकर्ताको आँखामा एक विशेषज्ञको स्थिति निर्माण गर्न, यो पनि एक कम्पनी ब्लग चलाउन विचार गर्न लायक छ।
कसरी लेख्ने? प्राथमिकताका छोटो वाक्यहरू र प्रापकलाई अनुकूलित भाषामा। यो केवल उत्पादनहरूका सुविधाहरूको वर्णन गर्न लायक हो, तर यो निर्दिष्ट उत्पाद वा उत्पादहरूको समूहको खरीदको परिणामस्वरूप विशिष्ट बेनिफिटहरूको पनि संकेत गर्दछ। वेबसाइटमा वर्णन सिर्जना गर्दा वा अनुकूलन गर्दा, यो लागू गर्न लायक पनि हुन्छ SEO सिद्धान्तहरू। यसका लागि धन्यबाद, हामी प्रयोगकर्तालाई केवल मूल्यवान सामग्री प्रदान गर्नेछौं, तर हामी जैविक खोजी परिणामहरूमा डोमेनको दृश्यतालाई पनि प्रभाव पार्न सक्दछौं। र यो कार्य बढेको रूपान्तरणमा पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ।
उपभोक्ता पथ विश्लेषण
वेबसाइटमा उपभोक्ता व्यवहारको विश्लेषण एक राम्रो दिशाको दिशामा छ वृद्धि रूपान्तरण। लाग्ने तुच्छ त्रुटिहरू वा कमिहरूले प्रयोगकर्ताहरूका निर्णयहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ।
एक उपकरण जुन वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको व्यवहारको विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ समर्पित SEO ड्यासबोर्ड। यसले तपाईंलाई सम्भावित ग्राहकले वेबसाइटमा के गरिरहेको छ ठ्याक्कै ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ: जहाँ उसले क्लिक गरिरहेको छ, उसले के हेरिरहेको छ र एक विशेष उपपृष्ठमा कति समय खर्च गर्छ।
उपभोक्तालाई प्रयोगकर्ताको आवश्यकतामा अनुकूलन गर्दा यो ज्ञान अनमोल हुनेछ: मोबाइल मोडमा बटनहरू एकदम सानो छन्, वितरण फारमहरू अस्पष्ट छन्, टोकरीमा उत्पादहरूको सारांश हराइरहेको छ वा केवल एउटा फारममा काम गर्दैन।
विश्लेषणले तपाईंलाई त्रुटिहरू समात्न र तिनीहरूको सुधारको उद्देश्यका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले यो आवधिक रूपमा यसमा फर्कन लायक हुन्छ।
२. ग्राहकको आवश्यकतामा प्रस्ताव समायोजित गर्नुहोस्
अनलाइन शपिंगलाई खरीददारहरूले सुविधाजनक ठानेका छन् र स्टेशनरी पसलहरूमा भन्दा बढी सम्भावनाहरू दिन्छन्। यो उनीहरूको सम्भावनाको फाइदा लिन र ग्राहकहरूको आवश्यकतामा प्रस्ताव समायोजन गर्न लायक छ। यस सन्दर्भमा, उत्पादनहरूको मूल्य, लागत, समय र वितरण प्रकार, साथै प्रस्ताव पेश गर्ने विधिको विश्लेषण गर्न यो राम्रो विचार हो।
एक सर्वेक्षण अनुसार अधिक लगातार अनलाइन खरीदहरू प्रभाव पार्ने कारकहरू:
कोहीले ओभरपे गर्न चाहँदैन - न त तपाईको अनलाइन स्टोरका ग्राहकहरूले। तिनीहरूको चासो राख्नको लागि, यो हालको बजार मूल्यमा उत्पादन मूल्यहरू समायोजन गर्न लायकको छ, ताकि प्रतिस्पर्धा पछाडि नहोस्।
केही खरीददारहरू विभिन्न स्टोरहरूमा मूल्य तुलना गरेर एक विशिष्ट उत्पादन वा मोडल खोज्छन्। तपाईको अफर बजारमा सस्तो हुनु हुँदैन, तर यो अरूसँग तुलनात्मक हुनुपर्दछ। एक आकर्षक डेलिभरीको साथ मिलेको राम्रो मूल्यले तपाइँको रूपान्तरण दरलाई असर गर्न सक्छ।
लागत र वितरणको समय
२०२० को जेमिअस अध्ययनले देखाए कि यस किसिमको किनमेल गर्दा आइपरेका समस्याहरूका बीच इन्टर्नौट्सले उल्लेख गरेका छन्, लामो समयसम्म डेलिभरीको लागि कुर्दै (% 37%) र उच्च डेलिभरी लागत (%०%)। उनीहरूको अपेक्षाहरूमा अनुकूल हुन के गर्ने? जवाफ सरल छ: वितरण गुणवत्ता सुधार गर्नुहोस्। नि: शुल्क शिपिंग एक कारक हो जसले प्राय: उपभोक्ताको खरीद निर्णयलाई प्रभाव पार्दछ।
सर्वेक्षणका अनुसार सबैभन्दा बढी मनपर्ने किसिमका डेलिभरीहरू घर वा कामका लागि कुरियर द्वारा वितरण हुन्छन् (धेरै जसो ents 74% उत्तरदाताहरूद्वारा दर्साइएको) र पार्सल मेसिनमा डेलिभरी हुन्छ (% 68%) - यो ज्ञान प्रयोग गरेर समाधानहरू कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ताहरूको लागि सुविधाजनक हो उनीहरूको खरीद निर्णयहरूमा सकरात्मक प्रभाव हुन सक्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले सरल र द्रुत लेनदेनको पनि सराहना गर्छन्। यो प्रक्रिया जति कम जटिल छ, त्यत्ति नै उत्तम। लोकप्रिय भुक्तान र वितरण विधिहरूको साथ खरीद फारामको पूरकले प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिक पटक खरिद गर्न सक्दछ, र त्यसकारण रूपान्तरण दर वृद्धि।
खरीद प्रक्रिया विश्लेषण गर्न, यो केवल GA मात्र प्रयोग गर्न लायक छ, तर माथि उल्लिखित पनि समर्पित SEO ड्यासबोर्ड उपकरण - टोकरी र भुक्तानी चरणमा उपभोक्ता व्यवहार व्यवहार लिने सम्भावित त्रुटिहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ र यसरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू निर्दिष्ट गर्दछ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तरिका
उत्पादनको मूल्य र डेलिभरीको फार्मले खरीद निर्णय निर्धारण गर्न सक्दछ, तर यी केवल पक्षहरू मात्र हुन्न जुन खातामा लिनु पर्छ। समान रूपमा महत्त्वपूर्ण, यदि बढी महत्त्वपूर्ण भएन, जुन उत्पादन वा सेवा प्रस्तुत गरिन्छ। यस सन्दर्भमा ध्यान दिन लायकको तत्वहरू हुन्:
उत्पाद/सेवा को बुझनीय नाम;
अद्वितीय, उच्च-गुण वर्णन;
राम्रो गुण फोटोहरू;
प्राविधिक प्यारामिटरको संकेत, यदि कुनै छ भने;
उचित अभिभावक कोटिमा उत्पाद निर्दिष्ट गर्दै।
एक स्टेशनरी स्टोर मा एक राम्रो विक्रेता सल्लाह र उस्तै उत्पादनहरु लाई सूचित गर्दछ जसले उपभोक्ताको अपेक्षाहरु लाई सम्भावित पूर्ति गर्दछ। हामी समान कार्य अनलाइन बिक्रीमा प्रयोग गर्न सक्दछौं। समान उत्पादनहरू वा सेवाहरूको कुशल प्रस्तुतीकरण एउटा चरण हो जुन धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सराहना गर्छन्।
के तपाइँ एक अनलाइन जुत्ता स्टोर चलाउनुहुन्छ? तपाइँ ग्राहकलाई छालाको जुत्ताहरू हेर्ने सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, तिनीहरूको मर्मत र सफाईको लागि विशेष जानकारीहरू वा इनसोल्स यसका लागि धन्यबाद, तपाईंले यी उत्पादनहरू खरीद गर्ने संभावना बढाउनुभयो, यदि प्रयोगकर्ता मूल रूपमा केवल छालाको जुत्ता किन्न चाहान्दछ। प्रस्तावका पूरक सम्बन्धित उत्पादनहरूको स cross्केत क्रॉस-सेलिंग हो।
तपाइँको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा, तपाइँले उही कोटीबाट अन्य उत्पादनहरूलाई पनि संकेत गर्न सक्नुहुन्छ - उदाहरणका लागि। उहि रंगको जुत्ता वा उहि निर्माताको उत्पादनहरू। समान अफरहरू प्रस्तुत गर्दै, तर उच्च मूल्य दायराबाट, अप-सेलिंग हो। उदाहरण? एक प्रयोगकर्ताले सस्तो १ 15 "ल्यापटप खरीद गर्न चाहेको साइटमा प्रवेश गर्नुभयो।
चयनित मोडेलको बाहेक, त्यहाँ सम्बन्धित अफरहरू पनि रहेका छन्, यस्तै अन्य १ "" ल्यापटपहरू राम्रो प्यारामिटरहरू र उच्च मूल्य दायरासहित। प्रस्तावको यो प्रस्तुतीकरणलाई धन्यवाद, धेरै महँगो उत्पादन किन्नको मौका बढी छ - हामीसँग एक छ खरीद गर्न उपभोक्तालाई विश्वस्त पार्ने मौका।
SEO. SEO/ADS मा लगानी गर्नुहोस्
इन्टरनेट मार्केटि .मा लगानी गर्नु भनेको ट्राफिक प्राप्त गर्ने एक तरीका हो जुन रूपान्तरणमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। किन? किनभने यसले तपाईंलाई लक्षित समूहमा विज्ञापन राम्रोसँग मिलाउन अनुमति दिन्छ - उदाहरणका लागि, उमेर, रुचि वा स्थान। अधिक सम्भावित रूचि उपयोगकर्ताहरू जसले यो देख्दछन्, उनीहरूले अधिक प्रयोग गर्न सक्छन् - अब वा भविष्यमा। एक संकरासम्म पुग्ने, तर प्राप्तकर्ताहरूको अधिक सहि परिभाषित समूहले ठूलो विज्ञापनको विपरित रूपान्तरणको सम्भावना बढाउँदछ।
गुगल विज्ञापनले प्रभाव तुरून्त पठाउन सक्दछ, तर केवल परिभाषित अवधिको लागि र अभियानमा लागू हुने कीवर्डहरूमा। यो नयाँ वा विशेष गरी लोकप्रिय उत्पादनहरूको विज्ञापनको लागि राम्रो विचार हो, उदाहरणका लागि। मौसमी उत्पादनहरू।
यो एसईओ को उपयोग गर्न लायक छ
प्राविधिक रूपमा डोमेन अप्टिमाइज गर्नुहोस्
एक लामो पृष्ठ लोडिंग समय, एक अनावश्यक स्टोर संरचना, धेरै विशाल ग्राफिक्स जुन सामग्री पढ्दा वा मोबाइल उपकरणहरूसँग नमिल्दो पछाडि उड्ने केही प्राविधिक समस्याहरू हुन् जसले कार्टको त्यागलाई असर गर्न सक्दछ वा वेबसाइटको भ्रमण छोटो पार्छ। यद्यपि यूएक्स र सीआरओको फरक मान्यताहरू छन्, किनकि पहिलो अवस्थामा हामी एक सम्भावित ग्राहकका लागि सबै भन्दा राम्रो सर्तहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौं, र दोस्रोमा हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं, यी गतिविधिहरूले एक अर्कालाई पूरक बनाउन सक्दछन्।
उदाहरण को लागी, पृष्ठ लोड गर्ने गतिमा सुधार गर्दै प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा यसले प्रभाव पार्छ - उसले पृष्ठ छोड्दैन, उच्च-गुणस्तरको सामग्रीको कदर गर्दछ, CTA मा क्लिक गर्छ र निर्णय लिन्छ जुन रूपान्तरणको साथ समाप्त हुन्छ। उसको निर्णय यूएक्स र सीआरओ क्षेत्रमा दुबै अप्टिमाइजेसनबाट प्रभावित थियो।
दीर्घकालीन परिणामहरू काम गर्न, एसईओ प्रयोग गर्न लायक छ। खोज इञ्जिन अनुकूलन लक्षित गतिविधि हो डोमेनको दृश्यता बढाउँदै गुगलको जैविक परिणामहरूमा। पोजिशनिंग एक प्रक्रिया हो जसको प्रभावहरू विज्ञापनको अवस्थामा भन्दा बढी समयको लागि पर्खनुपर्दछ, तर प्राप्त परिणामहरू निश्चित रूपमा अधिक टिकाऊ हुन्छन्। यदि तपाईं कसरी एसईओ गतिविधिले गुगलमा तपाईंको स्थितिलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्राहकहरु को कथा पढ्नुहोस्।
रूपान्तरण दर एक सूचक हो जुन केवल ROI को सर्तमा व्यवसाय विश्लेषणको लागि मात्र होईन, तर सम्भावित त्रुटिहरू समेट्नको लागि पनि हो - दुवै प्राविधिक र अफरको बेमेलको परिणामस्वरूप। स्पष्ट रूपमा, लेखमा हामी द्वारा प्रस्तुत सुझावहरू रूपान्तरण दर बढाउने उद्देश्यले सम्भव कार्यहरूको दायरा बाहिर निकाल्दैन।
जे होस्, तिनीहरू राम्रो सुरूवात बिन्दु हो - यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा स्टोरमा रूपान्तरण बढाउन चाहानुहुन्छ भने, यदि तपाईं हामी द्वारा दर्साईएको क्षेत्रहरू सुधार गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। साथै, आवधिक विश्लेषणको बारे सम्झनुहोस् - गुगल एनालिटिक्स वा समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, उपभोक्ता व्यवहार र आवश्यकता ट्र्याक गर्नुहोस् र डोमेनको टेक्निकल अप्टिमाइजेसनको ख्याल राख्नुहोस् ताकि यो नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्दछ।